किरात एकेडेमीको अध्यक्ष र पुरस्कार सिफारिस समितिको संयोजकमा भूपाल राई - लोकसंवाद
किरात एकेडेमीको अध्यक्ष र पुरस्कार सिफारिस समितिको संयोजकमा भूपाल राई
काठमाडौँ । कोभिड १९ को बिश्वब्यापी महामारी तथा किरात एकेडेमी संरचना अनुकुलको कृति अभावको कारण लामो समयसम्म स्थगित भएको 'किरात एकेडेमी पुरस्कार' वितरणको लागि एक सिफारिस समिति गठन भएकाे एकेडेमीले जनाएको छ । । यस सङसगैँ किरात एकेडेमीको नयाँ कार्य समितिको समेत पुनर्गठन गरिएको ।
एकेडेमीका अनुसार किरात एकेडेमीको अध्यक्षमा भूपाल राई, उपाध्यक्षमा डा‍. धनप्रसाद सुवेदी, महासचिव चेतनाथ धमला,सचिव प्रकाश राई र कोषाध्यक्षमा रुप कुमार राई रहनु भएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा डा‍. यादेवी ढकाल, कला राई, राधा राई, बम बानिया, मनिष पिएम र आस कुमार राईलाई चयन गरिएकाे छ ।
किरात एकेडेमी पुरस्कार यसभन्दा अगाडि पहिलो चोटि युग पाठक र दोस्रो चोटि झलक सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो । ५० हजार राशी रहेको यो पुरस्कार तेस्रो चोटि प्रदान गर्नको लागि पन्ध्र दिन भित्रमा कृति तथा योग्य ब्यक्ति छनोट गरिसक्ने गरि एक सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।
सिफारिस समितिको संयोजकमा भूपाल राई, सदस्यद्वय डा. धनप्रसाद सुवेदी र चेतनाथ धमला रहनु भएको एकेडेमीले जानकारी दिएको छ ।